Marketing Executive-(2) Posts
Eternity Plus Co., Ltd
Posted date: 09-Jan-2018
Close date: 22-Jan-2018
15F, Corner of Dhamazaydi Rd and Maharbawga Rd., Sanchaung, Yangon
Company Industry: Media/ Printing Service
No of Employee: Employees6to 10
Marketing Executive (Media & Advertsing)
Female (2) Posts
- အသက် ၂၅နှစ်အထက်၊ Media & Advertsing နယ်ပယ်အတွေ့အကြုံရှိသူ
- ဘွဲ့ရ ၊ Computer,Internet,Email ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးတတ်သူ။
- အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်သူ
- ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင် စွာသွားလာနိုင်သူ
- အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိသူ
- ရုပ်ရည် သင့်တင့်ပြေပြစ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ
- မိမိတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်သူ
Eternity Plus Media & Communication သည် ပုံနှိပ်နှင့် အွန်လိုင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း၊ ပန်းအလှဆင်နှင့် အခမ်းအနားအပြင်အဆင်လုပ်ငန်း၊ ပွဲအခမ်းအနားများစီစဉ်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည့် နိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းမီဒီယာ company နှင့် ပြပွဲများကျင်းပသည့် company တို့နှင့်လည်း လုပ်ငန်းများပူးတွဲလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်။
CV ကို eternityplanner@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ မြေနီကုန်း/စမ်းချောင်းမြို့နယ်နေထိုင်သူများကို ဦးစားပေးပါမည်။
Sales Supervisor Sales and Marketing (Travels & Tours) Sale/BD Leader Sales & Marketing Junior Executive Sales & Marketing Executive Mobile Sales Promoter Marketing Staff Sales Supervisor(Modern On-Trade)
Sales/Marketing(101)HR/ Administrative(85)Management(71)Others(59)Accounting/Finance/Cashier(45)Engineering/Technical(41)Driver/Security/Cleaning(28)Design/DTP(15)Restaurant(14)Hospitality/Tourism(11)Education/Teaching/Childcare(11)Logistics/Distribution(10)IT Hardware/Software(10)Medical/Doctor/Nursing(5)Customer Service(5)
အမှတ် ၂၁/၂၃ ဒုတိယထပ် (၅၂)လမ်းအောက်ဆုံးဘလောက်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။ 01-9010493, 09-264545457,
09-264545458, 09-5142331 theoppjournal@gmail.com, thejournalopportunity@gmail.com
Copyright © The Opportunity Journal 2018. All right reserved. Site Powered By Grip Technology